တႈကြႈထံဆိကမိႈ ဖဲဎႏူၚအါရံၚ ၂ သီ ၂၀၁၉ | Radio Veritas Asia
တႈကြႈထံဆိကမိႈ ဖဲဎႏူၚအါရံၚ ၂ သီ ၂၀၁၉
Daily reflection on Wednesday.(Jan,2nd,2019)
Daily Reflection on Wednesday.(2,1,2019) ဒီပုႈ၀ဲႈသးဘိလ႕ခရံဏပူၚခဲလ႕ဏသ့ဥဧ႕ယမ္ခရံဏအိဥဖ်ဲဥဒီးနံဥထီဥသီကဟဲစိဏန႔ဥဘဥသုယတႈအဲဥတႈကြံယတႈဃူးတႈဖိးယတႈအိဥဆူဥအိဥခ်႔ယမၚန႔ႈအီဥကဲယပူၚဒုဥပူၚဒါကိးဂၚဒဲးမ့ႈပ၀ဲကြဲၚလ့လိၚပွၚမၚသကိးတႈဖိသ့ဥတဖဥဆ႕ဂ့ၚဘဥသုအါ၀ဲလီၚ.တနံၚအံၚမ့ႈလါ(ဎူၚန၀ါရံၚ”၂သီ”၂၀၁၉)မုႈသ႕နံၚ မ့ႈစ့ႈကီး၀ဲ တႈကြႈထံဆိကမိဥလ႕ နီႈခိဒီးနီႈသးအဃိယမ္ပကကြႈထံဆိကမိဥ သကိးလ႕လံံဏတႈသးခုကစီဥအပူၚ ဒ္အမ့ႈ၀ဲ စီၚဎိၚဟဥ (၁း၁၉”၂၈)န႔ဥတက့ႈ။
ဒ္ပဎီၚတႈကတိၚဒိအိဥ၀ဲအသိး(ပထံဥဘဥအဖီဒီးပသ့ဥညါ၀ဲအထူဥ)န႔ဥလီၚ’ဒ္န႔ဥအသိးပွၚတဂၚန႔ဥ အ၀ဲမ့ႈပွၚဒ္လဲဥန႔ဥ ပကြႈလ႕ ယတႈဟူးတႈဂဲၚယတႈစံးတႈကတိၚယ အတႈရ့မူရ့သကိးအဖီခိဥ ပသ့ဥညါဘဥပ၀ဲအဂ့ႈ ဒီးပဆ႕တဲဏဘဥအဂ့ႈ ညီကဒဥန႔ဥလီၚ. ဘဥဆဥသနဏက့ယ အတႈသကဲးပ၀းယတႈဟူးတႈဂဲၚယတႈစံးတႈကတိၚယအတႈဖံးတႈမၚယပတသ့ဥညါအဂ့ႈဘဥ အိဥ ဒံးအါမးလီၚ. ဘဥမႏုဏလဲဥန႔ဥ မ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥပဏမးအသး သ့ဒိဥမးအဃိလီၚ. ပွၚလ႕ပဏမးအသး သ့ဒိဥမးသ့ဥတဖဥန႔ဥ ပဆ႕တဲဏအီၚယတသ့ညီညီဘဥ.
တနံၚအံၚ လ႕လံဏတႈသးခုကစီဥပူၚ ဂ်ဴအခိဥအနႈသ့ဥတဖဥ ပ်ဲလီၚအပ်ဲႈအဘီဥသ့ဥတဖဥလ႕ ကသံကြႈ၀ဲ စီၚဎိၚဟဥလ႕ အ၀ဲမ့ႈတဂၚလဲဥအဂ့ႈန႔ဥလီၚ’ ဒီးအ၀ဲသ့ဥသံကြႈ၀ဲ’’နၚန႔ဥနမ့ႈ ပွၚလ႕အအုဥက့ၚခီဥက့ၚတႈဂၚဧါယ မ့ႈတမ့ႈ၀ံတဂၚဂၚဧါ’ ဘဥမႏုဏလ႕အ၀ဲသ့ဥ သံကြႈစီၚဎိၚဟဥဒ္န႔ဥလဲဥန႔ဥယ ဖဲဆ႕ကတီႈဖဲန႔ဥအခါ မ့ႈလ႕အ၀ဲ အတႈသကဲးပ၀းယ အတႈစံဥတဲၚတဲလီၚ တႈသးခုကစီဥ ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥ တူႈလိဏအီၚအဃိန႔ဥလီၚ’ လ႕ခံတထံဥမ့ႈလ႕ စးထီဥလ႕အဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ အဆ႕ကတီႈလံ ပွၚသ့ဥညါအဂ့ႈအက်ိၚ ခဲလ႕ဏအဃိန႔ဥ ပတဎးကြႈဘဥ၀ဲလီၚ’ မ့ႈလ႕အမံၚဟူသဥဖ်ါအဃိယဖဲဆ႕ကတီႈဖဲန႔ဥအခါ စီၚဎိၚဟဥ မ့ႈအဲဥဒိးဟံန႔ဥ၀ဲ ကစႈခရံဏအလီႈအလးန႔ဥ သ့၀ဲန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲန႔ဥမ့မ့ႈပွၚလ႕ သူဥလီသးကြံတႈလ႕ ဟီဥခိဥခ်႕ တႈထူးတႈတီၚယ တႈလီႈတႈလးန႔ဥ ဖဲဂ်ဴသ့ဥတဖဥ စံးကြႈအီၚလ႕ အမ့ႈမတဂၚလဲဥန႔ဥ အ၀ဲပဏမးအသးဒီး စံးလီၚအသးလ႕ အမ့ႈခရံဏကစႈန႔ဥ သ့၀ဲလီၚ’ အ၀ဲသ့ဥညါ၀ဲလ႕ တႈပဏမးသးန႔ဥမ့ႈတႈမၚ တခါလႈလီၚဘွံးလီၚတီၚ ဒိဥမးန႔ဥလီၚ’တႈလ႕နပဏမးသးန႔ဥ လီၚဘွံးဆံးဒိဥလဲဥန႔ဥ ပကထံဥဘဥလ႕ တဂီၚမူပူၚ (မင္းသား/မင္းသမီး)သ့ဥတဖဥ အဘဥပဏမးအသးဒီး ဒီးမၚ၀ဲတႈဖံးတႈမၚလ႕ အလီၚဘဥအ၀ဲသ့ဥန႔ဥ ပထံဥဘဥလ႕ အ၀ဲသ့ဥလီၚဘွံးလီၚတီၚ၀ဲ ဒိဥမးန႔ဥလီၚ’
တနံၚအံၚ ပွၚလ႕ဟဲသံကြႈ စီၚဎိၚဟဥသ့ဥတဖဥန႔ဥ အ၀ဲက့ၚစံးဆ႕၀ဲလ႕ တမ့ႈမဲးစံဎါဘဥ တမ့ႈ၀ံတဂၚဘဥ အ၀ဲမ့ႈပွၚတဂၚလ႕ ကတဲဏကတီၚန႔ဥ ကစႈလ႕ကဟဲတဂၚ အက်ဲအဂ့ႈန႔ဥလီၚ’ ဒ္သိးပွၚဂၚသ့ဥတဖဥ ကထံဥဘဥကစႈ ကသဂ႕ႈဘဥကစႈဂ့ၚဂ့ၚအဂီႈ အ၀ဲမ့ႈပွၚတဂၚလ႕ ဟဲလ႕ညါဒီး ကတဲဏကတီၚက်ဲတဂၚန႔ဥ အ၀ဲအုဥအသးန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲမ့ႈပွၚလ႕အမံၚဟူသဥဖ်ါတဂၚ ဘဥဆဥ အိဥဒီးတႈဆီဥလီၚသူဥ ္ဆီဥလီၚသးအဃိ အ၀ဲမၚန႕ၚတႈန႔ဥလီၚ’ အ၀ဲအိဥကတဲဏကတီၚသးလ႕ တႈတီတႈလိၚ တႈဆီဥလီၚသးပူၚလ႕ ပွၚကမ်႕ႈသ့ဥတဖဥအဂီႈ ဒ္သိးကထံဥဘဥ ကသဂ႕ႈဘဥ ကစႈန႔ဥလီၚ’
တနံၚအံၚ စီၚဎိၚဟဥ အတႈအိဥကတဲဏကတီၚသး သ့ဥတဖဥန႔ဥ လ႕ပ၀ဲသ့ဥတဂၚစုဏစုဏအဂီႈ မ့ႈ၀ဲတႈအရ့ဒိဥ လ႕ပကဘဥကြႈထံ ဆိကမိဥလီၚက့ၚပသးန႔ဥလီၚ’ ခီဖ်ိပ၀ဲပတႈဖံးတႈမၚ တႈဟူးတႈဂဲၚသ့ဥတဖဥ ဒုးဖ်ါထီဥပွၚ ဒုးနဲဥပွၚလ႕ပမ့ႈ၀ဲ ပွၚခရံဏဖ ဒ္လဲဥတကလုဏလဲဥ မ့ႈပဆိကမိဥလီၚက့ၚပသးလံဧါ’’’မ့ႈပအိဥမုဏသူဥမုဏသးလ႕ ပတႈ သ့တႈဘဥ ပမၚန႕ၚတႈအဖီခိဥန႔ဥဧါ မ့ႈပသါပ့ၚနီဥပသးလ႕ ပစံးဘ်ဳးက့ၚဎြၚလံဧါ’’’မ့ႈပမ့ႈပွၚလ႕ ပစံးပၾတ႕ၚလီၚပသးလံန႔ဥဧါ’’ကိးမုႈနံၚဒဲးလ႕ပတႈအိဥမူပူၚ ပွၚအိဥလ႕ ပခိဥပဃ႕ၚသ့ဥတဖဥ ခီဖ်ိပတႈသကဲးပ၀းယတႈဟူးတႈဂဲၚယတႈစံးတႈကတိၚယပတႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥအဃိယမ့ႈပဒုးနဲဥ ပေးက်ဲလ႕အဂ့ၚ လ႕ကဃုထံဥန႔ဥဎြၚ ကအိဥဘူးဒီးဎြၚအဂီႈ အိဥဒီးပွၚလံဧါန႔ဥ မ္ပကက့ၚကြႈထံ ဆိကမိဥလီၚက့ၚပသးဒီး ဂုဏက်ဲးစ႕းသကိးတက့ႈ’